आर्थिक चलखेलकै कारण बुढिगण्डकी बनेनः क्षेत्री | eAdarsha.com
आर्थिक चलखेलकै कारण बुढिगण्डकी बनेनः क्षेत्री
पोखरा । बअपूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले बुढिगण्डकी परियोजनामा तीन ठूला नेताको नाम जोडेर आर्थिक चलखेलको अभिब्यक्ति दिएपछि राजनीतिक बृत्तमा ठूलै तरंग पैदा भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप भट्टराईले लगाएका थिए । यद्यपी दुवै पार्टीले विज्ञप्ती निकालेर अनियमितताको प्रमाण दिन भट्टराईलाई चुनौति दिएका छन् । तर भट्टराईले अनियमितता भएको प्रमाण आफुसँग भएको र छानविनमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताईरहेका छन् ।
सोही परियोजना र आर्थिक अनियमितताको बिषयलाई लिएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले समेत आर्थिक चलखेलकै कारण परियोजना अन्योलमा फसेको बताए । उनले डा. भट्टराईको अभिब्यक्ति सत्य भएको तर्क गरेका छन् । परियोजना सम्झौताका बेला उनी आयोगको उपाध्यक्ष थिए । ‘एउटाले गरेको काम अर्को सरकारले उल्ट्याउनै पर्छ र ? निर्णय त फेरियो ठिकै छ, लागत कसरी बढ्यो ?,’ उनले भने, ‘यसको केहि कारण त होला । नत्र एउटाले गरेको निर्णय अर्कोले फेर्नुपर्दैन ।’
आर्थिक एजेण्डामा राजनीति हावी भएर चलखेल बढेको उनको आरोप छ । ‘रोटी पकाएपछि रहेको टुक्रा झर्दो रहेछ । सरकारले पनि त्यही टुक्राका लागि निर्णय पटकैपिच्छे फेरेका हुन्,’ उनले थपे, ‘१८ अर्व क्षति पुर्तिको रुपमा दिएको छ । १४ अर्व दिएपछि परियोजना नै पूरा हुन्छ भन्ने छ । सबै पूरा भएपछि धमाधम कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दैन ? के कुराले रोकेको छ ?’
बुढीगण्डकी जलासयमा आधारित सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना हो । नेपालीकै लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी थियो । नेपालले नसक्ने भएपछि चीनको गेजुवा कम्पनीलाई ठेक्का दिईयो । त्यो सम्झौता समेत रद्ध गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित सबै ठूला आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको क्षेत्रीको आरोप छ । ‘१२ अर्वमा सक्ने भनिएको पोखरा एयरपोर्टको लागत दोब्बर कसरी पुग्यो ? मेलम्ची ५ बर्षअघि पूरा गर्नुपर्ने हो । अपर तामाकोशीको काम किन अलमलमा छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सबै कारण भनेको भ्रष्टाचार हो । केही नलिई यस्ता निर्णय हुँदैनन् ।’ नेपालको पछौटेपनलाई नेताहरुले बुझ्न नसकेका क्षेत्रीले बताए ।